Manafika Ny Fonenan’Ireo Shiita Ao Ejipta Ny Salafista, Efatra No Maty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2013 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Swahili, English
Mpikambana Ejiptiana efatra ao amin'ny antokom-pivavahana Shiita no namoy ny ainy tao Ejipta androany tamin'ny fanafihan'ireo Salafista ny fiangonan'izy ireo, taorian'ny fihantsiana nataon'izy ireo tamin'ny Shiita nandritry ny roa herinandro.
Araky ny filazan'ireo tatitra maro isan-karazany, nodorana sy notafihana ny fiangonan'ny Shiita tany Giza sy Kairo. Ny Al Badil News dia mitatitra ny fijoroana vavolombelon'ny avy tao amin'ny tranom-paty izay milaza [ar] fa novonoina ny iray tamin'ireo olona maty ireo ary ny telo ambiny naratra mafy ny lohany. Nahatonga fahatezerana tanaty aterneto izany tranga mahatsiravina izany.
Nandrakitra izany famonoan'olona izany i Hazem Barakat, nizara sary sy lahatsarin'ilay fanafihana feno rà mandrika (Tandremo : lahatsary Grafika) anaty aterneto. Nilaza izy tao amin'ny Twitter, fa norahonana izy tamin'ny famoahana iny tranga natrehiny maso iny. Hoy izy nanampy [ar] :
@7azem122 : Vonona hijoro vavolombelona eo anoloan'ny Mpampanoa lalàna aho ary hilaza amin'ny antsipirihany ny zava-nitranga ary holazaiko ny hoe ny mpitarika fivavahana no nitarika ireny vono olona ireny
Nitangorona teo amin'ilay lalan-kely ahitana ny fiangonan'ireo Shiita novonoina tao Kairo ny olona androany. Sary nozaraina tao amin'ny Twitter avy amin'i @7azem122
التحريض على الشيعه بدأ من اسبوعين فى جميع المساجد والنهارده كان التنفيذ شيوخ ولاد دين كلب ” قتلوهم وعندهم اطفال لسه صغيرين 🙁
@7azem122 : Efa roa herinandro lasa izay no nanomboka ny fihantsiana natao tamin'ireo Shiita nanerana ny Moske ary androany no nanatanterahan'izy ireo ny teti-dratsiny. Tena alika mihitsy ireo Pretra ireo. Vonoin'izy ireo hatramin'ny zazakely
Dimy ora talohan'izay, nibitsika izy :
@7azem122 : Nanomboka nandrava ny tafotranon'ireo Shiita ny Salafista. Tena tranga tsy fahita mihitsy.
Nijery fotsiny ireo polisy raha nahita ilay trano fivorian'ny Shiita ao Ejipta notafihan'ireo Salafista, hoy Hazem Barakat (@7azem122)
Nolazainy ihany koa fa ny polisy, anatin'izany ireo mpitandro ny filaminana, dia nijery fotsiny tamin'ny nitrangan'ilay raharaha.
Noraisin'ny mpampiasa aterineto tamim-pahatezerana ilay tranga.
Dr Bassem Youssef, mpandrangitra, dia nandefa bisika manao hoe :
@DrBassemYoussef : An'ny Shiita ny anio ; rahampitso an'ny Sufi, ary avy eo an'ny Copte, alohan'izany an'ny Bahai. Avy eo dia an'ny Silamo izay tsy manaiky ny hampiarahanareo ny Sharia (Fampianarana Silamo) amin'ny foto-pisainanareo, ary avy eo mety ho olona iray izay tsy tianareo ny fomba fijeriny
Nizara hevitra mitovy amin'izay ilay mpitoraka blaogy Ejiptiana, Zeinobia :
@Zeinobia : Androany izany dia an'ny Shiita, fa rahampitso mety ho ny mpiray vodirindrina aminao izay tsy mitovy hevitra aminao amin'ny sehatra politika sy rafi-pahalalana.
Nanontany toa izao i Ahmed Abou Hussein :
@abouhussein7 : Rehefa milaza aminareo ny mpitarika anareo [Ny Filoha Mohamed Morsi] hoe tsy mpino ny mpanao hetsi-panoherana ary mpaniratsira ny Shiita, aza gaga raha misy mamono izy ireo. Morsi a, tsy ny fahaverezan'ny fahamarinana intsony no fanontaniana mipetraka. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe : impiry no very ny fahamarinanareo ?
Gaga Ahmad Khalil ny amin'ny fomba fandraisan'ny olona ilay vono olona :
@ahmad_khalil : Namono Shiita efatra ny Salafista. Ny tena mahagaga dia ny fahitana fa misy amin'ireo manameloka iny tranga iny no milaza fa ny fandatsahan-drà Silamo dia Haram [Fady amin'ny Silamo]. Toy ny hoe ny fandatsahan-drà Kristiana dia Halal (azo ekena amin'ny Silamo]. Naharikoriko ny olon-drehetra ny hevitra mpanavakavaka toy izany
Sherif Azer dia nanamarika [ar] :
@sherif_azer : Be loatra ny tranga sy fanambarana nisy mikasika ny fotoan-dasa, nanomanana iny heloka natao tamin'ny Shiita tao Ejipta iny. Ny tsy fiomanana ny amin'ny mety hisian'ny tranga toy izany dia heloka ihany koa
Ary dia nanontany tena i Adel Salib hoe maninona ny olona no taitra tamin'ny fandrenesana ilay fanafihana Shiita tao Ejipta raha toa ka talohan'izany aza ireo polisy ireo hita nanafika – ary namono – “Coptes” Ejiptiana :
@Adel_Salib : Misy olona gaga raha nandre fa nijery fotsiny ny polisy tamin'ny fotoana nisian'ilay famonoana Shiita iny, raha toa ka roa volana lasa izaydia nanafika Katedraly iray ireo polisy.
Nisy namosavy ve ianareo sa tena dondrona ?
Sary tao amin'ilay bitsika nalefan'i Mohammed Saber, mpiasa ao aminà Televiziona Ejiptiana iray izay nankalaza ilay famonoana Shiita tao Ejipta. sary nozarain'i @Gemyhood tao amin'ny Twitter
Nanampy toy izao Ali:
@ali4592000 : Tezitra ve ianao fa nisy namono ny Sonita Silamo tany Birmania ary faly ny amin'ny fandorana sy ny fanosihosena ny fatin'ireo Shiita? Tokony hanatona mpitsabo biby mahay ianao
Rawah Badrawi dia nizara ny tantara sasantsasany :
@RawahBadrawi : Ny Shiita no nanorina an'i Kaira ry dondrona a. Izy ireo no nanangana ny hatsasaky ny vakok'i Kaira, isan'izany ny Al Azhar.
Nofintinin'ilay Blaogera Yemenita, Noon Arabia, toy izao izany :
@NoonArabia : Miverina amin'ny andron'ny Jahiliyya [tsifahalalàna] isika. Tsy misy idiran'ny Silamo ny rà mandrika any Ejipta, Libanona ary Syria
Mazava ho azy fa tsy ny olon-drehetra no mihoron-koditra amin'iny fanafihana iny. Ilay Blaogera Mohamed Beshir dia nizara bitsika iray nalefan'i Mohammed Saber, mpanolotra iray ao amin'ny Fahitalavitra Ejiptiana, izay nankalaza iny fahafatesana Shiita iny ary nanao antso ny amin'ny tokony hisian'ny vono olona misimisy kokoa.
@Gemyhood : Izy dia mpanolotra ao amin'ny Televiziona Ejiptiana [fanjakana] izay faly ny amin'ny famonona ireo Shiita